Volkano any Islandy: toetra sy fipoahana | Meteorolojia tambajotra
Volkano any Islandy
Portillo Alemanina | 07/01/2022 11:28 | Haibolantany
Islandy, tany misy ranomandry sy afo, dia paradisa voajanahary. Mifanohitra amin'ny hafanan'ny tany ny herin'ny ranomandry mangatsiaka sy ny toetr'andro Arktika. Ny vokatr'izany dia tontolon'ny fifanoherana mahavariana amin'ny hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa amin'ny tontolo manjavozavo. Tsy ho vita izany rehetra izany raha tsy misy volkano islandey. Ny herin'ny volkano any nosy Izy io dia afaka mamaritra tsara kokoa ny toetran’io tany io noho ny volkano hafa rehetra, ka mamorona saha tsy manam-pahataperana rakotra lavenona, lemaka midadasika misy fasika mainty, ary tampon-tendrombohitra mikitoantoana sy vavahady midadasika.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny volkano any Islandy sy ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy.
1 Volkano any Islandy
2 firy no misy?
3 Matetika ny fipoahana
4 Loza misy volkano any Islandy
Ny herin'ny volkano ambanin'ny tany koa dia namorona ny sasany amin'ireo zava-mahatalanjona malaza indrindra eto amin'ny firenena, toy ny loharano mafana voajanahary sy geyser mipoaka. Fanampin'izany, ny vokatry ny fipoahana taloha dia hita eny amin'ny hantsana noforonin'ny lava-bato lava sy andry basalt hexagonal.
Olona an'arivony no nirohotra nankany Islandy mba hijery ny volkano sy ny fahagagana noforoniny ary mbola noforoniny. Mandritra ny fipoahan'ny volkano, dia tokony ho mazoto kokoa amin'ny vintana isika jereo ny iray amin'ireo fisehoan-javatra mahatalanjona sy mahatalanjona indrindra eto an-tany. Raha jerena fa zava-dehibe amin'ny toetran'i Islandy sy ny toetry ny indostria ary eny fa na dia ny toetry ny firenena aza, dia nanangona ity torolàlana manam-pahefana momba ny volkano any Islandy ity izahay, ary manantena izahay fa afaka mamaly ny fanontaniana rehetra mety hapetrakao amin'ny tenanao izany. ny herin’ireo volkano ireo.
firy no misy?
Any Islandy dia misy volkano mavitrika 130 eo ho eo ary volkano matory. Miisa 30 eo ho eo ny rafitra volkano mavitrika eo ambanin'ny nosy, afa-tsy ao amin’ny Fjords Andrefana, manerana ny firenena.
Ny antony tsy ananan'ny West Fjords intsony ny volkano dia izy no faritra tranainy indrindra amin'ny tanibe islandey, Efa 16 tapitrisa taona teo ho eo izay no niforona azy io ary nanjavona tao amin'ny faritry ny Mid-Atlantique. Noho izany, ny West Fjords no hany faritra ao amin'ny firenena izay mitaky herinaratra hanafana rano fa tsy rano geothermal.
Ny asan'ny volkano any Islandy dia noho ny toerana misy ny firenena mivantana eo amin'ny havoana afovoan'i Atlantika izay manasaraka ny takelaka tektonika any Amerika Avaratra sy Eurasian. Islandy dia iray amin'ireo toerana vitsy eto amin'izao tontolo izao ahitana an'io havoana io ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ireo takelaka tectonic ireo dia samy hafa, izay midika fa tafasaraka izy ireo. Amin'ny fanaovana izany, ny magma ao amin'ny lamba dia hiseho hameno ny habaka izay noforonina ary hiseho amin'ny endrika fipoahana volkano. Mitranga eny amin'ny tendrombohitra io tranga io ary azo jerena any amin'ireo nosy volkano hafa, toa an'i Azores na Santa Elena.
Ny Mid-Atlantic Range dia mamakivaky an'i Islandy manontolo, raha ny marina, ny ankamaroan'ny nosy dia any amin'ny kaontinanta amerikana. Misy toerana maro eto amin'ity firenena ity izay ahitana havoana ampahany, anisan'izany ny Saikinosy Reykjanes sy ny faritra Mývatn, fa ny tsara indrindra dia Thingvellir. Any ianao dia afaka mandeha amin'ny lohasaha eo anelanelan'ny takelaka ary mijery tsara ny rindrin'ny kontinanta roa amin'ny lafiny roa amin'ny valan-javaboary. Noho ny tsy fitovizan'ny takelaka dia miitatra eo amin'ny 2,5 sm eo ho eo isan-taona io lohasaha io.
Matetika ny fipoahana
Tsy ampoizina mihitsy ny fipoahana volkano any Islandy, saingy mitranga tsy tapaka izany. Tsy mbola nisy folo taona hatramin'ny fiandohan'ny taona XNUMX tsy nisy fipoahana, na dia kisendrasendra aza ny mety hitrangan'izy ireo haingana na miely patrana.
Ny fipoahana farany fantatra tany Islandy dia nitranga tao Holuhraun any amin'ny Highlands tamin'ny 2014. Grímsfjall koa dia nandrakitra fipoahana fohy tamin'ny 2011, raha ny volkano Eyjafjallajökull malaza kokoa dia niteraka olana lehibe tamin'ny taona 2010. Ny antony ampiasana ny teny hoe 'fantatra' dia noho ny ahiahiana fa nisy fipoahana volkano ambanin'ny gilasy marobe tany amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena izay tsy nahavaky ny ranomandry, anisan'izany i Katla tamin'ny 2017 sy Hamelin tamin'ny 2011.
Amin'izao fotoana izao, kely dia kely ny loza mitatao amin'ny ain'olombelona mandritra ny fipoahan'ny volkano any Islandy. Ireo toby horohorontany miparitaka manerana ny firenena dia tena mahay maminavina azy ireo. Raha misy volkano lehibe toa an'i Katla na Askja mampiseho famantarana mirohondrohona, dia hoferana ny fidirana amin'ny faritra ary hojerena akaiky ny faritra.
Noho ny feon’ny fieritreretana tsaran’ireo mponin’ny tany voalohany, dia lavitra ny nokleary misy mponina ny volkano mavitrika indrindra. Vitsy, ohatra, ny tanàna any amin’ny morontsiraka atsimon’i Islandy, satria any avaratra no misy volkano toa an’i Katla sy Eyjafjallajökull. Satria eo ambanin'ny glacier ireo tampon'isa ireo, Hiteraka tondra-drano goavana ny fipoahana, izay mety hamafa ny zava-drehetra eny an-dalana mankany amin'ny ranomasina.
Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny faritra Atsimo ho toy ny tany fasika mainty. Raha ny marina, dia lemaka voaforon'ny ranomandry.
Loza misy volkano any Islandy
Noho ny tsy ampoizina azy, ireo tondra-drano ireo, fantatra amin'ny hoe jökulhlaups, na espaniola amin'ny teny islandey, dia mbola iray amin'ireo lafiny mampidi-doza indrindra amin'ny asan'ny volkano islandey. Araka ny voalaza etsy ambony dia tsy hita foana ny fipoahana ao ambanin'ny ranomandry, ka mety hitranga tsy misy fampitandremana ireo tondra-drano ireo.
Mazava ho azy fa mandroso hatrany ny siansa, ary ankehitriny, Raha mbola misy fisalasalana na dia kely aza ny mety hisian'ny havandra dia azonao atao ny miala sy manara-maso ny faritra iray. Noho izany, noho ny antony mazava dia voarara ny mitondra fiara amin'ny lalana voarara, na dia amin'ny fahavaratra na rehefa toa tsy misy atahorana.
Na dia lavitra ny foibe be mponina aza ny ankamaroan'ny volkano, dia mitranga foana ny loza. Amin'ny toe-javatra toy izany anefa, ny fepetra vonjy taitra nataon'i Islandy dia hita fa tena mandaitra, toy ny hita tamin'ny fipoahana tamin'ny 1973 tao Heimaey ao amin'ny Nosy Vestman.
I Hemai no hany nosy misy mponina ao amin'ny Nosy Vestman, vondronosy volkano. Rehefa nipoaka ilay volkano, dia olona 5.200 XNUMX no nonina tao. Tamin'ny vao mangiran-dratsy tamin'ny 22 Janoary, nanomboka nisokatra teo amin'ny sisin'ny tanàna ny fissure ary nivezivezy namakivaky ny afovoan-tanàna, nandrava lalana ary nandrakotra tranobe lava an-jatony.
Na dia tamin’ny alina be sy tamin’ny ririnina matin’ny ririnina aza no nitrangan’izany. natao haingana sy nahomby ny fandroahana ny nosy. Raha vao tafapetraka soa aman-tsara ireo mponina, dia niara-niasa tamin'ny tafika amerikana napetraka tao amin'ny firenena ny ekipa mpamonjy voina mba hampihenana ny fahavoazana.
Amin'ny alàlan'ny fanondrahana tsy tapaka ny rano an-dranomasina ho any amin'ny fikorianan'ny lava, dia tsy vitan'ny hoe navitrika hiala tamin'ny trano maro izy ireo, fa nanakana azy koa tsy hikatona ny seranan-tsambo, ka namarana ny toekaren'ny nosy mandrakizay.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny volkano any Islandy sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Volkano any Islandy
Famantaranandro astronomia any Prague